Hoa đào | Cây cảnh - Hoa cảnh - Bonsai - Hòn non bộ - Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hoa đào | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hoa đào | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Kubantu basemantla, le ntyatyambo ayimele iphoswe ngexesha leTet. Intyatyambo yepesika luphawu lobuhle benkcubeko yeTet, isiko lesizwe sethu.
Kwintsomi yaseVietnam, imifanekiso ipesika Intyatyambo inxulunyaniswa namantombazana amancinci, amancinci, kwaye abuthathaka, njengoko kuboniswa yintetho ethi “i-willow ebuthakathaka igrumba isilika”. Umfanekiso ipesika Intyatyambo ikwadityaniswe kuthando kunye nobudlelwane obumiselwe kwangaphambili bamakhwenkwe kunye namantombazana asemaphandleni, avela kwiingoma ezininzi zaseVietnam. Le ntyatyambo idubula entwasahlobo, ifanekisela ithamsanqa, ulonwabo, ubuhlobo obusondeleyo kunye nobudlelwane obuhlala buhleli.
Bona Okuninzi: Intyatyambo yePlum
Isahluko sokuqala umthi wepesika Endlwini okanye ukunika umntu omthandayo kukubonakalisa iminqweno yobomi obulungileyo, ulonwabo olugqibeleleyo, uvuyo noxolo.
Umthi wepesika (igama lenzululwazi: Prunus persica) sisityalo esikhuliselwa iziqhamo okanye iintyatyambo zaso. Ngumthi ovuthulukayo, omncinci, okhula ukuya kutsho kwi-5-10 m ubude. Amagqabi ayo a-lanceolate, ubude be-7-15 cm kunye no-2-3 cm ububanzi. Iintyatyambo ziyaqhakaza ekuqaleni kwentwasahlobo, ngaphambi kokuba amagqabi; iintyatyambo zingatshatanga okanye zidityaniswe, 2.5-3 cm ububanzi, pink kunye namagqabi ama-5. Isiqhamo sepesika, kunye ne cherries, iplums, kunye neapilkosi ngamandongomane.Isiqhamo saso sinembewu enkulu evalelwe kwiqokobhe lenkuni eqinileyo (ebizwa ngokuba yi “mbewu”), inyama ityheli okanye imhlophe, Inencasa emnandi kunye nevelvety, ulusu olufukufuku.
Igama lenzululwazi elithi persica mhlawumbi livela kwinkolelo yaseYurophu yokuqala yokuba iipesika zavela kummandla wasePersi (Persia) (i-Iran yangoku). Imvumelwano enkulu phakathi kweengcaphephe zezityalo namhlanje kukuba yaqala e-China yaze yangeniswa ePersi nakummandla weMeditera ngeSilk Road ekuqaleni kwembali.Uluntu, mhlawumbi malunga ne-2nd millennium BC (Huxley et al., 1992).
Iindidi zepesika ezilinyiweyo zohlulwe zibe ziindidi ezimbini, “imbewu ekhululekileyo” kunye “nembewu encangathi”, kuxhomekeke ekubeni imbewu incamathele kwipulp okanye hayi; Zombini ezi ndidi zinenyama emhlophe okanye emthubi. Iipesika ezinenyama emhlophe zihlala zinencasa emnandi kakhulu kunye nobumuncu obuncinci, ngelixa iintlobo ezityheli-zenyama zihlala zinencasa emuncu kunye nobumnandi, nangona oku kukwahluka kakhulu. Yomibini imibala eqhelekileyo inemizila ebomvu enyameni yabo. Ipesika emhlophe, ephantsi-muncu ithandwa kakhulu e-China, eJapan, nakumazwe ase-Asia ajikelezileyo, ngelixa abantu baseYurophu nabaseMntla Melika bekhetha iindidi eziphuzi kunye nezimuncu.
I-nectarine liqela lemihlanganisela yeepesika kwaye inolusu olugudileyo, olungenaboya. Nangona abathengisi beziqhamo bethatha iipesika ezinentsiba kunye ne-nectarines njengeziqhamo ezahlukileyo, zonke zezohlobo olufanayo. I-nectarine mhlawumbi yeza emva kokufakelwa ngokuphindaphindiweyo kwepesika enentsiba, ngokwesiqhelo ngenxa yoguqulo lwemfuzo. I-nectarine inokuba mhlophe okanye tyheli, kunye nepulp encanyathiselwe okanye ingaqhotyoshelwanga kwimbewu. Ngamanye amaxesha umthi wepesika unokuvelisa iinectarines ezimbalwa okanye ngokuphambene. Ngokwesiqhelo iinektharines zisemngciphekweni wokonakala kuneepesika ezinentsiba. Imbali yokuzalwa ye-nectarines ayicacanga; Ukukhankanywa kokuqala okurekhodiweyo kwayo eNgilani kungo-1616, kodwa mhlawumbi yayikhule ngaphambili kakhulu kuMbindi Asia.
Ipesika kwinkcubeko yaseAsia:
Ipesika yaziwa eTshayina naseJapan hayi nje njengesiqhamo esidumileyo kodwa ikwanxulunyaniswa neentsomi ezininzi kunye neenkolelo. UMomotaro (Ukufundisa iPesika), omnye wawona manani abekekileyo kunye nesiqingatha sembali eJapan, wazalelwa kwipesika enkulu eyayidada emlanjeni.
E-China, iipesika zithathwa ngokuba zityiwa yi-fairies ngenxa yeempawu zayo ezingaqondakaliyo zobomi obude obunikwa abo bazityayo. U-Ngoc Hoang, uthixo olawula amazulu, unomfazi ogama linguTay Vuong Mau. UKumkanikazi waseNtshona uMama wamema iifairies ukuba zitye iipesika zokungafi kwaye ngaloo ndlela baqinisekisa ubukho babo obungunaphakade. Iifairies zenziwe isidlo esitofotofo nguKumkanikazi waseNtshona uMama kumnyhadala wetafile yeepesika. Iifairies kwafuneka zilinde iminyaka engama-6,000 kulo mthendeleko wobunewunewu; Imithi yepesika yeFairy ibonisa amagqabi rhoqo kwiwaka leminyaka kwaye kuthatha iminyaka engama-3,000 ukuba isiqhamo sivuthwe. Imifanekiso eqingqiweyo yendlovu ebonisa abantu abazimase itheko likaTay Vuong Mau badla ngokuba neepesika ezintathu.
Isiqhamo gmba Idlala indima ebalulekileyo kwiinkolelo zaseTshayina kwaye luphawu lokuphila ixesha elide. Umzekelo onxulumene neepesika libali likaZhang Daoling (张道陵), lithathwa ngabaninzi ukuba ngumsunguli weTaoism. UZhang Guo Lao (張果老), omnye wabaNgafiyo abasibhozo bamaTshayina, udla ngokuboniswa ephethe ipesika yokungafi. Iintyatyambo zePeach nazo zixabiswa kakhulu kwinkcubeko yaseTshayina, efana ne-apricot (apricot) iintyatyambo.
Ngenxa yencasa emnandi kunye nokuziva xa udibana okokuqala, kwiChina yakudala, “ipesika” yayikwaligama lokomfuziselo labatshakazi abatsha, kwaye lalisetyenziswa nakwezinye iinkcubeko ezininzi.indlela efanayo yokubhekisa kubafazi abancinci abahle (umzekelo; esiNgesini kukho igama elithi peachy (eliguqulelwe ngokuthi “ipesika ethambileyo”).
Ukuba iinkcubeko zaseTshayina nezaseJapan zijolise ikakhulu kwintsingiselo yeepesika, inkcubeko yaseVietnam igxile kakhulu kwintsingiselo yeentyatyambo zeepesika. Kwintsomi yaseVietnam, umfanekiso weentyatyambo zeepesika unxulunyaniswa namantombazana amancinci, amancinci, kunye namantombazana abuthathaka, achazwe ngentetho ethi “i-willow ebuthathaka yeepesika zesilika” okanye amazwi engoma yamandulo ye-cheo ingoma ethi “I-peach willow ingaba ndedwa. amagxa asenzima ukugcina umkhondo wendlela ende.”
Iintyatyambo zeepesika kwiingoma zesintu zaseVietnam:
Umfanekiso weentyantyambo zepesika unxulumene nothando kunye nobudlelwane obumiselwe kwangaphambili bamakhwenkwe kunye namantombazana asemaphandleni, avela kwiingoma ezininzi zaseVietnam.
“Sinetyala okanye uthando,
Likamva kunye nobomi, sobabini senze ibhondi
Ndifana nentyatyambo yeplum, intyatyambo yepesika
Yintoni intsingiselo yobudlelwane, ndoda?”
“Sifana noDao Nguyen,
Xa konwabile ilizwe libuthathaka, xa licaphukisa kuyabanda.
Ubusuku bonke kwaye ndonwabile,
Khetha usuku olumnandi nolumnandi lokucula.
Intyatyambo yepesika kunye nokunye ukuhamba kwamanzi,
Ndihleli emhlabeni amashumi eminyaka kodwa andikadlali.
Abantu abanetalente ebomini,
Ukuzola kunye nembeko ngabantu basentsomini. “
“Ngobusuku bokugqibela iplamu ibuze ipesika:
Ngaba kukho umntu oze kukha iintyatyambo kwigadi yasentwasahlobo?
Iintyatyambo zeepesika ziyadubula.
Phakamisa isandla sakho ukukha, ukoyika ukuba nemithi ekhaya.
Iyamangalisa into yokuba umtsha apha.
Xa ubona intyatyambo, uya kwazi ukuba ngubani owatyala lo mthi?
“Yabona, ndiza kubamba isandla sakho
Wabuza lombuzo, utheni yena?
Yintoni iplamu yipesika?
Iyintoni intsingiselo yobudlelane ebomini?
“Imvula yasentwasahlobo, amasimi eepesika asasaziweyo
I-peacock igcwalisa umhlaba, ithintela ucingo ekutyaleni iintyatyambo
Ngubani owenza umoya uvuthuze nemvula?
Wuyeke umthi uwe, yiyeke ife intyatyambo.
“Intyatyambo yepesika ibunile sithandwa sam
Ndiyathemba ukuwaphula amagqabi, ndigqume umbethe kwiipesika.”
“Ukumamela ngempazamo kwiintaba kunye neentaba Bong
I-Orenji kodwa imnandi kuphela, imnandi
Ukwaphula igadi yeepesika
Jika amafu ukusula umoya, ungene kubudlelwane obumiselwe kwangaphambili “
“Umhlobo wam endimthandayo ufana nepetali yentyatyambo yepesika
Ndifresh kwaye ndilungile, ndimnike ikhadi
Ngoku ngenxa yepistil, intyatyambo iyabuna
Igadi yasentwasahlobo ihlwempuzekile, kutheni uyigxeka?”
Ibali leentyatyambo zeepesika kwiholide yeTet:
Kudala-dala, kwimpuma yentaba iSoc Son, kwakukho umthi wamandulo weepesika otyatyambayo onamasebe achume ngokungaqhelekanga nomthunzi ogubungela indawo ebanzi. Kuloo mthi mkhulu weepesika kukho oothixo ababini ekuthiwa nguTra no-Uat Luy abahlala apho, besasaza amandla abo okukhusela abantu kuwo wonke loo mmandla. Naziphi na iidemon okanye imimoya efika kwaye ihamba iya kuba nzima ukuphepha isohlwayo soothixo ababini. Umtyholi wayewoyika kakhulu amandla okududuma kwaba thixo babini kangangokuba woyika umthi wepesika, ukubona nje isebe lentyatyambo yeepesika kwanele ukubaleka.
Ngomhla wokugqibela wonyaka, njengabanye oothixo, uTra kunye no-Uat Luy kwafuneka baye ezulwini ukuze bahloniphe uNgoc Hoang. NgoMhla woNyaka oMtsha, aba thixo babini babengekho ehlabathini, ngoko ukuze baphephe ingqumbo, izenzo ezingendawo zikasathana, abantu baye kukha amasebe aneentyatyambo zeepesika, bawafake ezingqayini, ukuze abo bangakwaziyo ukuzikha babenokuzoba. umfanekiso wabo ephepheni.izithixo ezibini zincanyatheliswe phambi kwendlu. Lo mkhuba uye waba lisiko, Nyaka ngamnye, uNyaka omtsha ufika, wonke umntu uzama ukutyala isebe lentyatyambo yepesika endlwini yakhe.
Ngokuhamba kwexesha, abantu baseVietnam abasakholelwa kwiziporho kunye noothixo njengoko ookhokho babo benza ngaphambili, kodwa bagcina isiko lokuhombisa izindlu zabo ngamasebe epesika amatsha, iphepha elibomvu nelipinki elinamaqabane ahambelanayo, bethandazela isiqalo esihle. kwindawo echwayitileyo neqaqambileyo.
Bona Okuninzi : Ipesika elahlekileyo – ipesika entle enqabileyo kwaye enexabiso.
Intyatyambo yepesika kwiholide yeTet
Izityalo zeentyatyambo kwiholide yeTet
Chiêm ngưỡng những cành hoa đào ngày tết đẹp nhất thế giới | Hatgiongtihon.net
[Ý Nghĩa] Hoa Dành Dành | Hatgiongtihon.net